Daafaca Arsenal Ee Hector Bellerin Oo Ugu Dambayn Shaaca Ka Qaaday Sababtii Ay Qaar Ka Mid Ah Xiddigaha Arsenal Ugu Dabaal Degi Waayeen Goolashii Alexis Sanchez Uu Ka Dhaliyay Crystal Palace – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Daafaca Arsenal Ee Hector Bellerin Oo Ugu Dambayn Shaaca Ka Qaaday Sababtii Ay Qaar Ka Mid Ah Xiddigaha Arsenal Ugu Dabaal Degi Waayeen Goolashii Alexis Sanchez Uu Ka Dhaliyay Crystal Palace
Daafaca Arsenal Ee Hector Bellerin Oo Ugu Dambayn Shaaca Ka Qaaday Sababtii Ay Qaar Ka Mid Ah Xiddigaha Arsenal Ugu Dabaal Degi Waayeen Goolashii Alexis Sanchez Uu Ka Dhaliyay Crystal Palace
Xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal ee Hector Bellerin ayaa ugu dambayn shaaca ka qaaday sababtii ay qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Arsenal ugu dabaal degi waayeen goolashii uu Alexis Sanchez ka dhaliyay kooxda Crystal Palace wakhtigii uu joogay kooxda Arsenal.
Qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Arsenal ayaan u dabaal degin goolkii 2-aad ee uu Alexis Sanchez ka dhaliyay kooxda Crystal Palace kulan ka tirsanaa horyaalka premier league todobaadkiisii 20-aad kaas oo dhacay 28 December ee 2017.
Bellerin oo ka hadlaya Alexis Sanchez ayaa yiri” “Alexis waa ciyaaryahan cajiib ah”ayuu Yiri Bellerin. “Mid ka mid ah kuwa ugu fiican Premier League waa hubaal laakiin waa ciyaaryahan kaasoo had iyo jeer doonaya inuu ku guuleysto”.
“Waxa uu cid walba ka dalbadaa in ay wax walba soo bandhigaan mararka qaar waxa ay noqon kartaa mid aad u badan, waxa ugu weyn ee uu doonayo ayaa ah in uu badiyo, inuu bixiyo boqolkiiba boqol”.
“Xilli ciyaareedkan waxaa laga yaabaa ayna isaga laftiisa wax walba u fiicnayn laakiin run ahaantii waan rumeysanahay inuu boqolkiiba boqol bixiyay.
Xiddiga oo ka hadlaya sababtii ay qaar ka mid ah xiddigaha Gunners ugula dabaal degi waayeen goolkii 2-aad ee Crystal Palace ayuu yiri”Kulankii Crystal Palace waxa aan u dabaal degnay gool qaar ka mid ah xiddigaha ayaan iska joogay booskoodii, waxa aan la hadlayay Calum Chambers sababtoo ah waxa jirtay arin ku saabsan ciyaarta, aniga ahaan taas ayaa iiga muhiimsanayd dabaal degii goolka”